Olee otú Iji Mepụta Azụmaahịa Ntuziaka Iji jirichaa Nkuchi Ngwa Mobile Gị? | Martech Zone
Na-ele anya ịhapụ ịhapụ ngwa kachasị egwu oge niile n'ụwa? Ọ dị mma, anyị kwenyere na gị, mana buru ụzọ leba anya na ndụmọdụ ndị a gbasara otu ị ga - esi dobe ya ka ọ nwee ọganiihu. Ngwa dị jụụ abụghị naanị ihe na - eme ka ị nwee ihe ịga nke ọma, kamakwa usoro ahịa dị mma yana nyocha dị mma. Nọgidenụ na-agụ iji chọpụta otu ị ga - esi nwee Candy Crush nke ọgbọ a:
Bụrụ na onye ọrụ gị akpụkpọ ụkwụ na mmalite
Ọ bụghị naanị na ị na-ekepụta ngwa maka onwe gị n'ihi na ịchọtara ịrị elu ahịa ahịa a. Mba. You're na-ekepụta ngwa mkpanaka maka ndị ọrụ njedebe. Ya mere, malite iche echiche ka ha. Chọpụta onye ndị ị na-ege ntị lekwasịrị anya, ma chọpụta ihe omume ntụrụndụ ha, banyere mmasị ha na-ahụ (agba na imewe), ihe ha gụrụ, ụdị egwu na-amasị ha. Ihe niile ị nwere ike. Nke a ga - eme ka ị bịaruo onye ọrụ njedebe ahụ nso n'ihi na ị ga - ada ụda na ihe ha masịrị ya. Ọbụna ịmebata egwu kwesịrị ekwesị maka ha ga-enwe mmetụta dị ukwuu na mkpebi ha ibudata ya, nke kachasị mkpa, ka ị ghara ihichapụ ya.
Ka emechara, ndị ahịa nwere mmasị na ọtụtụ narị ngwa, mana ha na-ehichapụ ha ụbọchị ole na ole ka e mesịrị n'ihi na ihe adịghị mma na ha, ma ọ bụ na ha nwere nkụda mmụọ. Yabụ, ezigbo ọgụ na mmepe ngwa na-eme ka onye ọrụ tinye ya na ngwa ahụ ma ghara ịmanye ya ihichapụ ya.
You've chọpụtachaa onye ọrụ ị chọrọ, tinye ya / ya ka ọ bụrụ isiokwu iji nyocha ma hapụ ya ka ọ meere gị ezigbo ngwa ga-amasị ha na ekwentị ha. Tụkwasa m obi; ọ ga - eme ihe dị iche.
Ibe ọdịda ga-ezu oke
Peeji nke mbata bu ihe nke abuo onye oru huru, o gha adi oke aka, zaa ya onwe ya ajuju niile. Ikwesiri inwe nseta ihuenyo ole na ole, ozi gbasara ihe ngwa ahụ na-eme yana ihe kacha mma. Nyocha ndị ahụ ga-enwu gbaa, nke mere na onye ọrụ ahụ enweghị mmechuihu ma nye ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na nyocha dị njọ, gee ndị ọrụ ntị
Nwere ike ịnweta ụfọdụ nyocha na-adịghị mma, ma ọ bụrụ na ha niile gbasara otu okwu, nke a pụtara mmelite ọzọ ga-edozi nsogbu ahụ, ma ọ bụ onye ọrụ nwere ike ịhapụ ngwa gị. Aghọtaghị ihe dị na ngwa ngwanrọ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na a na-eme ngwa ahụ mgbe ebidoro ya. Agbanyeghị, nke a bụ echiche na-ezighi ezi, ngwa ahụ emebeghị, ịkwesịrị imelite ya oge niile iji dabaa ụkpụrụ onye ọrụ ahụ ọhụụ.
Keywords dị mkpa
Ngwa ahịa njikarịcha yiri ezigbo njikarịcha nchọta ihe (SEO), o nwere otu echiche: a na-enyocha okwu ụfọdụ karịa ndị ọzọ. A na-achọkarị mkpụrụ okwu dị mfe. Ikwesiri ịchọ maka ọnọdụ, mana enwere ọtụtụ mmemme ga - enyere gị aka ịchọpụta ihe bụ isiokwu dabara adaba maka gị.
Mepụta usoro ahia ma rapara na ya
Iji usoro ahia bụ naanị ụzọ ụlọ ọrụ si adị ndụ na ahịa ọ bụla, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha ma ya ma ọ bụ na ọ bụghị. Ire ahia bu nnukwu ngalaba ga - enyere gi aka ma oburu n’icho ire nkpuru n’ime square ma obu nye ndi mmadu ndi ngwa. Yabụ, kpọkọta na ngalaba azụmaahịa gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa ma ọ bụrụ na ịnweghị ụdị ngalaba a na ụlọ ọrụ gị, ma chọpụta ihe bụ ụzọ ziri ezi nke idobe ngwa gị na ndị ọrụ njedebe. Na igwe mkpanaka, ihe na-aga ngwa ngwa; ngwa adịlarị puku, ma ọ dị ka ọ nweghị ụzọ isi mee ka ndị na-ege gị ntị lekwasịrị anya na ngwa ị nwere maka ha.
Ma, na-eji ọdịnala ahịa azum, nke a na-akpọkwa ahịa ahịa, nwere ike idobe gị n'anya onye ọrụ njedebe. Jiri naanị ntanetị ahịa ma ọ bụrụ na ị bụghị ngwa dabere na ọnọdụ, dịka weebụsaịtị, vidiyo, nleba anya, na ihe ndị ọzọ. Ndị nnọchi anya mba, dịka ndị ama ama ma ọ bụ ndị ọkachamara, ga - enyere ngwa gị aka ime ka ngwa gị mara. Ndị mmadụ na-ege ndị a ma ama ntị n’ihi na ha ma onye ahụ ma tụkwasị ha obi.
Usoro ahia bụ 'ezigbo ngwugwu' nke ngwa gị nke onye ahịa ga-ebu ụzọ hụ. Gbaa mbọ hụ na ọ dị mma.
Mepụta ngwa na ịme ya nke ọma bụ usoro siri ike, mana ọ ga-enye gị afọ ojuju n'ezie. Echefula iji usoro ịzụ ahịa siri ike nke ga-eme ka ị nọrọ ebe kwesịrị ekwesị maka ndị ahịa gị ezubere iche. Chọọ mkpụrụokwu kwesịrị ekwesị iji kpọọ ngwa gị, ma mee ka peeji ọdịda gị bụrụ ngosipụta zuru oke nke ngwa gị.
Tags: ucheMobile na Mbadamba ụrọmobile ngwamobile ngwa nkuchiekwentị mkpanaaka Keywordsmobile ngwa nyochaatụmatụ ekwentị mkpanaakamobile ngwa usability
Ọkt 26, 2016 na 5:51 AM
Azụmaahịa Azụmaahịa Zuru oke nwere ike ijide n'aka ịkwalite usoro mkpanaka mkpanaka gị. Enwere ngwaọrụ dị iche iche dị na BetaPage eji maka ebumnuche ahịa, mgbasa ozi, SEO, Saas, wdg. Lelee ma bulie azụmaahịa gị nke ọma.
Ọkt 27, 2016 na 7:25 AM
Ọ dị ịtụnanya na anyị nwere ike idekọ ihe ndị ọbịa anyị na-eme na saịtị anyị. Daalụ maka ịkekọrịta ntuziaka a dị oke egwu. Obi dị m ụtọ na m hụrụ na saịtị gị isiokwu a dị na isi, daalụ ọzọ ma nwee ọmarịcha ụbọchị.
Ọkt 27, 2016 na 12:58 PM
Edemede Maazị Rajput na-enye ihe mmụta dị elu, enwere m obi ụtọ na ihe o kwuru banyere nguzozi dị mkpa n'etiti imepụta ngwa siri ike, ngwa-enyi na enyi na-adọrọ adọrọ; na iji otu ihu ahụ na -emepụta azụmaahịa na-aga nke ọma.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na atụmatụ azụmaahịa bụ otu ihe ahụ maka ụlọ ọrụ dabere na ngwa yana azụmaahịa dị n'ịntanetị, mana enwere esemokwu dị iche iche chọrọ ịkọ mgbe ị na-eke ngwa na olile anya nke ọma azụmaahịa; njikarịcha isiokwu bụ ihe kachasị mkpa, dịka ọmụmaatụ, na ọnụọgụ ohere a na-eji / oge ndị ahịa na-eji na ngwa ahụ adịkarịghị karịa weebụsaịtị, yabụ ịnweta isi gafere ngwa ngwa!
Ọganihu ngwa na nhọrọ nwere ike ịbụ ịme nọmba site na ọnụọgụ ma ọ bụrụ na ị kpacharaghị anya. Dị ka o kwesịrị, hapụ ụfọdụ ohere dị mma iji tinye akụ n'ime usoro ndị a ga - eme ka ngwa ngwa gị ga - esi na ngwa ahịa asọmpi siri ike, kpalie ndị ahịa ma nyere aka melite nhọrọ.